Manampy zaza kamboty any Korea Manado, Indonezia ny Korean Air
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Manampy zaza kamboty any Korea Manado, Indonezia ny Korean Air
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Vaovao farany momba ny Indonezia • Vaovao • Vaovao farany momba ny Korea Avaratra • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Ny mpiasan'ny Korean Air dia nitsidika an'i Buttrang, tanàna iray tsy dia misy olona manana tahan'ny fahantrana ambony ary tsy misy fanabeazana na tombontsoa ho an'ny fifanampiana. Nandritra ny fotoanany tao Stilltrang, ireo mpilatsaka an-tsitrapo dia nanorina ny fototra ho an'ny efitrano fatoriana amina trano fitaizana zaza kamboty eo an-toerana ary nitsidika ny trano fitaizana zaza kamboty mba handany fotoana amin'ireo ankizy.
Ny iray amin'ireo vondrona mpirotsaka an-tsitrapo Koreana Air dia nanampy ity vondrom-piarahamonina teo an-tanànan'ny tanànan'i Manado, Sulawesi Avaratra, Indonezia ny 31 Janoary hatramin'ny 5 Febroary 11. Manado no renivohitry ny faritany Indoneziana Sulawesi Avaratra, miorina amin'ny nosy Sulawesi, ny lehibe indrindra faha-XNUMX nosy eto amin'izao tontolo izao.
Ireo vondrona mpilatsaka an-tsitrapo Koreana Koreana dia nandray anjara tamin'ny vondrom-piarahamonina sahirana any Kambôdza ary nanampy tamin'ny fananganana trano tany Bicol, izay tratran'ny rivodoza, tamin'ny taon-dasa.
Amin'izao fotoana izao, ny Korean Air dia manana vondrona mpilatsaka an-tsitrapo 25 mavitrika manampy amin'ny tetik'asa sy fandaharan'asan'ny fiarahamonina amin'ny trano fitaizana zaza kamboty, ivon-toerana fanarenana ho an'ireo sembana, ary koa tobim-pitsaboana zokiolona hanohana ireo vondrona sahirana.
Amin'ny maha-mpitatitra manerantany lehibe indrindra azy, Korea Air dia hanohana hatrany ireo hetsika ataon'ny mpilatsaka an-tsitrapo manerantany mba hanatanterahana ny andraikiny ara-tsosialy amin'ny maha-ampahany azy amin'ny orinasa hamerina ny fiarahamonina.
Malahelo noho ny fahaverezan'ny filoham-pirenena teo aloha ny mpikarakara ny fizahan-tany Oganda ...